Laharam-pamorehana… | NewsMada
Taorian’ny Tetezamita, saika lasa teteza… miitatra: nambara ombieny ombieny fa maika avokoa ny zava-drehetra amin’ny fanarenam-pirenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Inona ny eo? Vao mainka ka miharatsy noho ny teo aloha ny raharaha: manjaka ny tsy fandriampahalemana, ny tsimatimanota, ny vahiny…
Tsy vitan’izany, miseholany ny fivarotan-tanindrazana, gaboraraka ny harem-pirenena, mahazo vahana ny fandrobana tany, isan’andro vaky ny fidangan’ny vidim-piainana… Tsy mahomby ary tsy mahafehy fanjakana tsinona ny mpitondra, saika olom-pahefana ihany fa tsy olom-panjakana: tsy ahoana izay manjo ny vahoaka.
Amin’izany, lasa miavaka sy hafa ho azy ny tena maika sy zava-dehibe amin’ny vahoaka ifotony: fampanjakana ny fandriampahalemana, fanamaivanana ny fidangan’ny vidim-piainana, fandaminana ny ady sy fandrobana tany etsy sy eroa, famoronana asa, fampanjarian-tsakafo… Inona no afitsoky ny mpitondra amin’izany?
Izao faramparany izao, ny fanajariana ny zaridaina sy toeram-pilalaovana manodidina ny farihin’Anosy no zava-dehibe sy maika ny fitondrana foibe. Tsy misy maharatsy izany. Saingy izay ve no tena maika sy ilain’ny vahoaka amin’izao fotoana izao; eny, na ny eto Antananarivo Renivohitra ihany aza aloha?
Ny famatsian-drano fa tanàn-dehibe sy renivohi-pirenena mbola misy mpantsaka; ny tata-drano tsentsina, ny lalana potika, ny trano tsizarizary tsy mendrika ny maha olona, ny tsena misavoritaka, ny toeram-pidiovana tsy ampy… Eto Antananarivo Renivohitra ihany ireo, fa tsy aiza. Raha mba izany no andaniam-bolabe?
Tsy misy isehosehoana sy isekosekoana hoe mahavita zavatra? Na tsy misy hanindriana aloka ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra… Mangala-dia amin’izany ny eritreritry ny maro amin’izao. Tsy mba mijery sy maka ny hevi-bahoaka tsinona ny mpitondra, afa-tsy amin’izay hahazoany tombontsoa manokana ho azy?
Laharam-pahamehana amin’izay tena ilaina sy mahasoa vahoaka ve no hatao sa laharam-pamorehana… hamitahana vahoaka amin’ny fifidianana?